श्रीकृष्णको श्रीमती १ 16,००० किन थियो? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - योग-आध्यात्मिकता
श्रीकृष्णको श्रीमती १ 16,००० किन थियो?
घर योग आध्यात्मिकता विश्वास रहस्यवाद विश्वास रहस्यवाद oi- स्टाफ द्वारा सुपर | प्रकाशित: बिहिवार, जनवरी २,, २०१ 2015, १:30::30० [IST]
फिगर पढेर चकित हुनुभयो? तर हो, धर्मशास्त्रले भन्छ कि भगवान कृष्णको १ 16,००० पत्नीहरू थिए। विशिष्ट भन्नुपर्दा, उनका १ He,१०8 पत्नीहरू थिए। अब, हामी सबैलाई थाहा छ कि बहुविवाह एउटा प्राचीन प्रचलनमा प्रचलित प्रचलन थियो, तर १ yet,१०8 बाटोबाट बाहिर गएको जस्तो देखिन्छ।
रोमान्टिक गीतहरू तपाईंको प्रेमिकालाई समर्पित गर्न
भारतीय पौराणिक कथामा यस्तै धेरै कथाहरू छन् जो केवल पेचीलाक हुन्। भगवान् कृष्ण, धेरै चमत्कारका लागि परिचित छन्, केहि कहिले पनि हामीलाई एकदमै कल्पित कथाका साथ षड्यन्त्र गर्न विफल हुँदैनन्। राधासँगको उनको अनन्त प्रेम, आठ सबैभन्दा सुन्दर राजकुमारीहरूसँग उनको विवाह र अझै १ 16,००० र अधिक पत्नीहरू भएकोले निश्चित रूपमा यसको कारण के हुने थियो भनेर हामीलाई अचम्ममा पार्दछ।
यदि हामी धर्मशास्त्रमा जान्छौं भने हामी भेट्नेछौं कि भगवान श्रीकृष्णले राधासंग कहिल्यै विवाह गरेनन्। तर उनले आठ जना महिलासँग विवाह गरे। उनका आठजना पत्नीहरूको नाम रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविन्द, नागनाजिति, भद्रा र लक्ष्मण थिए। ती मध्ये रुक्मिणी र सत्यभामा सबैभन्दा चर्चित थिए।
अब १ 16,००० पत्नीहरूको कथालाई अगाडि बढाउँदै हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि श्रीकृष्ण एक चमत्कारिक राजा थिए। उहाँसँग सम्बन्धित जे भयो, एक कारणको लागि भयो। त्यसकारण यो भन्नु गलत हुनेछैन कि १,,१०8 पत्नीहरू राख्नु पनि “कृष्ण लीला” को हिस्सा थियो।
त्यसोभए, भगवान कृष्णले १ 16,००० महिलाहरूसँग विवाह गर्नु पर्ने अवस्था कस्तो थियो? हामीलाई पत्ता लगाउनुहोस्।
नरकसुरा वर्तमान आसामसँग परिचित प्रज्ञायोतिषाका राजा थिए। उनी विष्णुको सुअर अवतार वराहा र पृथ्वी देवी भूमि देवी (पृथ्वी) को दानव (असुर) थिए। भूमीका छोराका रूपमा उनलाई भौमा वा भौमासुरा पनि भनिन्थ्यो। उनले स्वर्ग, पृथ्वी र अण्डरवर्ल्ड तीनवटा संसारलाई जितेका छन्। पृथ्वीमा, उनले पराजित राष्ट्रहरूका १,000,००० राजकुमारीहरू कब्जा गरे। स्वर्गमा, उनले देवी र स्वर्गका राजा - इन्द्रकी आमा, अदितिको कानका औंठीहरू चोरे। अंडरवर्ल्डमा उनले पानीका देवता वरुणको शाही छाता कब्जा गरे।
उनले राजकुमारहरूलाई पहाडमा कैद गरे। यसैबीच, इन्द्रले भगवान कृष्णलाई नरकसुरसँग लड्न, अदितिको झुम्का फिर्ता लिने र संसारलाई राक्षसको अत्याचारबाट मुक्त गर्न बिन्ती गरे। यसैले श्रीकृष्ण गए र राक्षसको वध गरे।
नरकसुराको मृत्युपछि भूमि देवीले १ stolen,००० महिलाहरू सहित सबै चोरी भएका सामानहरू कृष्णलाई फर्काइदिए। भगवान कृष्णले उनीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो तर उनीहरूले त्यो गरेनन्।
कस्टर्ड सेब डायबेटिसको लागि राम्रो हो
प्राचीन समयमा, अरू राज्यहरूका राजाहरूले अपहरण गरेका महिलाहरूलाई राजा हराए पछि फिर्ता लिन सकीयो। तिनीहरूले कलंक र लाजमर्दो जीवन बिताए जुन विश्वासको कारण उनीहरूले अरू कोही व्यक्तिले छोए। नरकासुराको सेलमा भएका १,,१०8 महिलाहरूले पनि यस्तै पीडा भोगेका थिए। यसैले उनीहरूले श्रीकृष्णलाई सबैलाई आफ्नी स्वास्नीको रूपमा ग्रहण गर्न प्रार्थना गरे।
१ 16,१०8 पत्नीहरू
यसैले भगवान कृष्णले ती सबैलाई विवाह गर्नुभयो। भागवत पुराणले कृष्णको विवाह पछि उनको पत्नीहरूको जीवनलाई समेट्छ। प्रत्येक कनिष्ठ पत्नीहरूलाई सयौं दासी-नोकर्नीहरूको साथ एउटा घर दिइयो। कृष्णले आफूलाई धेरै रूपहरूमा विभाजन गर्दछन्, प्रत्येक पत्नीको लागि एक र प्रत्येक पत्नीको साथ रात बिताउँदछ। बिहान, उहाँ द्वारका राजाको रूपमा काम गर्दा उनका सबै रूपहरू कृष्णको एक शरीरमा एक हुन्छन्। प्रत्येक श्रीमती कृष्णको व्यक्तिगत सेवा गर्दछन्, उनको आराधना गर्दै, उनको नुहाई, लुगाफाटा, फ्यान, उपहार र फूल मालाहरु दिएर।
अर्को कथन अनुसार, ती नराम्रो व्यक्ति .षि नारदले एकपटक भगवान् कृष्णलाई आफ्नी धेरै पत्नीहरू मध्ये एकलाई स्नातकको रूपमा गिफ्ट गर्न अनुरोध गरे। कृष्णले उनलाई आफ्नी श्रीमती जोगाउन भन्यो यदि उनी उनीसंग हुनुहुन्न भने। त्यसपछि नारद कृष्णको १,,००8 पत्नीहरूका प्रत्येक घरहरूमा घुम्न गए तर उनले कृष्णलाई आफूले भेट्ने हरेक घरमा भेट्टाए र यसैले नारद स्नातक नै रहनुपर्‍यो।
कुकरमा केक कसरी पकाउने
यस घटनालाई हेर्दा, नारद विश्वस्त थिए कि यो भगवान कृष्णको रूपमा ईश्वरीय हो, एक पूर्ण र धेरै गुणा प्रकट, जसले एकै समयमा आफ्नो १,000,००० साथीहरूको संगतिबाट आनन्द उठाए। यसैले भगवान श्रीकृष्ण सर्वोच्च देवी हुनुहुन्छ जो आफ्ना १,,१०8 पत्नीहरू जत्तिकै कुनै न कुनै रुपमा आफ्ना भक्तहरूसँग हुनुहुन्छ।
किन भेडाले वनमा सिता छोडे
विवाह पछि स्तन आकार बढ्छ
अनुहारमा कागती को रस को नुकसान
नरिवल तेल लाभ र साइड इफेक्ट
कसरी घरेलु उपचारहरू प्रयोग गरी निष्पक्ष छाला प्राप्त गर्ने
गुरु पूर्णिमा २०१ date भारत क्यालेन्डरमा मिति
शुष्क छालाका लागि ट्यान हटाउने घरेलु उपचार